Dalka Hindiya oo laga mamnuucay haweenka halka mar saddexda dalqadood lagu furo -
Dalka Hindiya oo laga mamnuucay haweenka halka mar saddexda dalqadood lagu furo. Haweenka Muslimka ah ee ku dhaqan dalka Hindiya ayaa maxkamada sare ee dalkaas u dacwootay kadib markii ay badatay tirada haweenka saddexda dalqadood hal mar lagu furo.
Haweenka Muslimiinta Hindida ah ayaa maxkamadda ku sheegay in mararka qaarkood fariin qoraal ah oo loogu soo diro baraha bulshadda ee internet-ka sida Facebook-ga, Twitter-ka iyo waliba goobo kale oo ay kamid yihiin WhatsApp-ka.
Haddaba maxkamada sare ee dalka Hindiya ayaa maalintii talaadada xukun ka gaartay furitaanka saddexda jeer ama dalaaqo ay ragga Muslimiinta ahi ay isla markiiba ugu furaan haweenkooda. Maxkamada sare ee Hindiya ayaa sheegtay in furitaanka noocan ahi uu xad-gudub ku yahay dastuurka dalkaas.
Xaakimiintii go’aankan la horgeeyay ee Maxkamadda Sare oo shan qof ahaa ayaa go’aanka ay gaareen waxaa taageeray oo u codeeyay 3-2. Maxkamada ayaa codsatay in mudo lix bilood ah la hakiyo furitaanka saddexda dalaaqo halka mar haweenka loogu furo. Qofkii lagu helo in uu xaaskiisa ku furo saddex dalaaqadood hal mar ayeey ganaax a ku xukuntay makamadu.
Maxkamadda ayaa sheegtay in dawladdu ay waajib ku tahay in ay soo rogto sharci cusub oo furiinka ah si ay u bedesho wax ay ku tilmaanta dhaqanka la tirtiray oo qadiimi ah.
“Waxay joojineysaa isticmaalka aan sharciga aheyn, isticmaalka habka furitaanka, taas oo ah, in kasta oo ay ka soo horjeedo xuquuqda aadanaha,” sidaas waxaa qareen Vandana Shah oo iyadu matalayesay haweenka Hindida ah ee iyagu dacwadan soo oogay.
Xigashadda sawirka: Sam Panthaky/AFP/Getty Images